VaIsraeri vanokundwa kuAi (1-5)
Munyengetero waJoshua (6-9)
Chivi chinoita kuti vaIsraeri vakundwe (10-15)
Akani anobatwa uye anotemwa nematombo (16-26)
7 Asi vaIsraeri vakaita zvisina kutendeka pazvinhu zvaifanira kuparadzwa, nekuti Akani+ mwanakomana waKami, mwanakomana waZabdhi, mwanakomana waZera, wedzinza raJudha, akatora zvimwe zvinhu zvaifanira kuparadzwa.+ Jehovha akabva atsamwira vaIsraeri kwazvo.+ 2 Joshua akabva atuma varume kubva kuJeriko kuti vaende kuAi,+ iri pedyo neBheti-avheni, kumabvazuva kweBheteri,+ akati kwavari: “Endai munosora* nyika.” Saka varume vacho vakaenda, vakasora Ai. 3 Pavakadzokera kuna Joshua vakamuudza kuti: “Ngapasaenda hapo vanhu vese. Varume vanenge 2 000 kana kuti 3 000 vanokwanisa kukunda Ai. Usanetesa vanhu vese nekuita kuti vaende ikoko, nekuti kunongova nevanhu vashomanana.” 4 Saka varume vanenge 3 000 vakaenda ikoko, asi vakatiza varume veAi.+ 5 Varume veAi vakauraya varume 36, uye vakavatevera kubva kunze kwegedhi reguta kusvika kuShebharimu,* vakaramba vachivauraya pamateru. Saka vanhu vakanga vasisina ushingi.* 6 Joshua akabva abvarura nguo dzake, ndokuzvambarara akaisa chiso chake pasi, pamberi peAreka yaJehovha kusvikira manheru, iye nevakuru vaIsraeri, uye vakaramba vachiisa guruva mumisoro yavo. 7 Joshua akati: “Haiwa, Changamire Ishe Jehovha, makayambutsirei vanhu ava Jodhani, kuti muzongotiisa mumaoko evaAmori kuti tiparadzwe here? Kudai hedu takangogutsikana nekuramba tichigara mhiri* kwaJodhani! 8 Pamusoroi, haiwa Jehovha, zvino ndingatii Israeri zvaatiza vavengi vake? 9 VaKenani nevagari vese vemunyika pavachazvinzwa, vachatikomba vodzima zita redu panyika uyewo muchaitei nezita renyu guru?”+ 10 Jehovha akapindura Joshua achiti: “Simuka! Wararireiko wakaisa chiso chako pasi? 11 VaIsraeri vatadza. Vaputsa sungano+ yangu yandakavarayira kuti vachengete. Vakatora chimwe chinhu chaiva pazvinhu zvaifanira kuparadzwa,+ vakachiba,+ vakachiviga pazvinhu zvavo.+ 12 Saka vaIsraeri havazokwanisi kumirisana nevavengi vavo. Vachatendeuka votiza vavengi vavo, nekuti vava kufanira kuparadzwa. Handizovi nemi zvakare kusvikira maparadza chinhu chaifanira kuparadzwa+ chiri pakati penyu. 13 Simuka utsvenese vanhu!+ Vaudze kuti, ‘Zvitsvenesei mangwana, nekuti Jehovha Mwari waIsraeri ari kuti: “Pakati penyu pane chinhu chinofanira kuparadzwa, haiwa imi vaIsraeri. Hamuzokwanisi kukunda vavengi venyu kusvikira mabvisa chinhu chinofanira kuparadzwa pakati penyu. 14 Munofanira kuuya mangwanani, dzinza nedzinza, uye dzinza richabatwa naJehovha+ richauya pamberi, mhuri nemhuri, uye mhuri ichabatwa naJehovha ichauya pamberi, imba neimba, uye imba ichabatwa naJehovha ichauya pamberi, murume mumwe nemumwe. 15 Anobatwa aine chinhu chinofanira kuparadzwa achapiswa nemoto,+ iye nezvinhu zvake zvese, nekuti aputsa sungano+ yaJehovha uye nekuti aita zvinonyadzisa muIsraeri.”’” 16 Saka mangwana acho Joshua akamukira mangwanani, akaita kuti vaIsraeri vauye pedyo, dzinza nedzinza, uye dzinza raJudha rakabatwa. 17 Akaita kuti mhuri dzaJudha dziuye pamberi, uye mhuri yekwaZera+ yakabatwa, achibva azoita kuti mhuri yekwaZera iuye pamberi, murume mumwe nemumwe, Zabdhi akabatwa. 18 Akazoita kuti imba yaZabdhi iuye pamberi, murume mumwe nemumwe, uye Akani mwanakomana waKami, mwanakomana waZabdhi, mwanakomana waZera, wedzinza raJudha, akabatwa.+ 19 Joshua akabva ati kuna Akani: “Ndapota, mwanakomana wangu, kudza Jehovha Mwari waIsraeri ureurure kwaari. Ndapota, ndiudze zvawakaita. Usandivanzira.” 20 Akani akapindura Joshua achiti: “Chokwadi ndini ndakatadzira Jehovha Mwari waIsraeri, uye izvi ndizvo zvandakaita. 21 Pandakaona nguo yakanaka yekuShinari+ yaiva pazvinhu zvataipamba, uye mashekeri* 200 esirivha nechigodo chimwe chete chegoridhe chinorema mashekeri 50, ndakazvida, ndikazvitora. Iye zvino zvakavigwa muvhu mutende rangu, uye mari iri pasi pazvo zvese.” 22 Joshua akabva angotuma nhume, dzikamhanyira kutende raAkani, dzikaona nguo yacho yakavigwa imomo, mari iri pasi payo. 23 Saka vakatora zvinhu zvacho mutende, vakaenda nazvo kuna Joshua nevaIsraeri vese, vakazviisa pamberi paJehovha. 24 Joshua nevaIsraeri vese vaaiva navo vakabva vatora Akani+ mwanakomana waZera, nesirivha yacho, nenguo yacho yakanaka, nechigodo chacho chegoridhe,+ nevanakomana vake, nevanasikana vake, nemombe dzake, nemadhongi ake, nemakwai ake, nembudzi dzake, netende rake, nezvinhu zvake zvese, vakaenda nazvo kuBani reAkori.+ 25 Joshua akabva ati: “Nei watiunzira dambudziko?* Jehovha achakuunzira dambudziko nhasi.”+ VaIsraeri vese vakabva vavatema nematombo,+ vachibva vavapisa nemoto.+ Saka vakavatema vese nematombo. 26 Vakatutira murwi wakakura wematombo pamusoro pake uye nanhasi uchiripo. Jehovha akabva adzora hasha dzake huru.+ Ndokusaka nanhasi nzvimbo iyoyo ichinzi Bani reAkori.*
^ Kana kuti “munoongorora.”
^ Kureva kuti “Makomba akadzika anocherwa nevanotsvaga zvicherwa.”
^ ChiHeb., “Saka mwoyo yevanhu yakanyunguduka ikaita semvura.”
^ Kana kuti “watiunzira nhamo; waita kuti tiraswe.”
^ Kureva kuti “Dambudziko; Kuraswa.”